Hiran State - News: Labo ka mid ah shirar isdabajoog ah oo xilka looga qaadayo R/wasaaraha Somaliya oo Mogdisho lagu soo gabo gabeeyey.
Labo ka mid ah shirar isdabajoog ah oo xilka looga qaadayo R/wasaaraha Somaliya oo Mogdisho lagu soo gabo gabeeyey.
HS:-Labo ka mid ah shirar isdabajoog ah oo xilka looga qaadayo R/wasaaraha Somaliya C/wali Gaas oo Mogdisho lagu soo gabo gabeeyey.
Shirar iyo olole siyaasadeed kii ugu danbeyey oo ka socda Mogdisho taasi oo ay ujeedadiisu tahay sidii xilka wasiirka 1aad looga qaadi lahaa C/wali Gaas.shirarkaan oo kuwii ugu danbeyey ay dhaxmareen koox ka tirsan wadaadada ilbaxa looga yaqaano Mogdisho amaba si kale hadaan u dhigno Alaa Shiikha iyo Shiikh Shariif waxuuna shirkaasi ku dhamaaday in xilka laga qaado C/Wali Gaas iyadoo ragii Shariifka la shiray ay durbaba Shiikh Shariif u balamiyeen koox xildhibaano ah oo markii la doonana qaab qabiil loola xariiro markii la doonana danaha siyaasada markaasi taagan lagu fushado.
Xildhibaanadii uu Shariif la kulmay ayaa waxaa lagu wargeliyey inay Mooshin ka soo diyaariyaan C/wali Gaas iyagoo kooxdaani u cuskadeen inuu galay qiyaano qaran oo uu dhaqalo badana si gooyni ah u siiyey maamulka Puntland iyo inuu Kenya la galay heshiis ay ku macneeyeen iibin dhulka koofurta Somaliya.
Xildhibaanadan ayaa qorshahoodu yahay iney howshaan fuliyaan maalmaha soo socda. sida muuqata Shiikh Shariif oo ah siyaasi da yar waxaa hada heysta jahwareer siyaasadeed kii ugu xumaa isagoo sida laga soo xigtay ka shalaaynayo labadii sano ee ugu horeysay siyaasadiisa oo kaka dhamaday safaro iyo diyaarad raacid.
Hadaanse wax yar faah faahin ka bixino kooxda Alaa Shiikh la baxday iyo mustaqbalkoda siyaasadeed.
Bulshada Somaliyeed ayaa 21kii sano ee ina dhaaftay malinba maalinta ka danbeysa maqlayey ururo klala duwan oo midkastaba wato ujeedo u gaar ah markaad dhinaca kale ka eegtana intooda badan marka magaca laga soo tago waa isku aqli iyo siyaasad.
Hadaba magaca Alaa Shiikh Maxaa loola jeedaaa?
Alaa Shiikh Markii hore qaabkii ay ku dhismeen waxey ahaayeen rag isku tagay oo u badnaa wadaado iyo aqoonyanahano si meeshii looga sii wado magacii wanaagsanaa ee culimadii waaweyneyd ee dalka soo martay umada Somaliyeedna heer fiican gaarsiisay diinta, kuwaasi oo ay intooda badan ku hal qabsadaan Shiikh Max'ed Macalin iyo Shiikh Cumar Faaruuq iyo culimo badan oo aanu halkaan magacyadooda ku soo koobi karin.
Laakinse kooxda magacii si qaldan ayey u isticmaaleen oo waxey iska dhaadhiciyeen iney siyaasada wadanka la wareegaan iyagoo tartan aan la ogeyn waxa laga dhaxlayo kula jira kooxo aanu ka xusi karno Islaaxul Islaamiya. kooxdu waxey meel iska dhigeen dantii guud ee wadanka iyo sidii dadka iyo dalka lagu bad badin lahaa waxeyna ku mashquuleen nolol aduunyo sida hanti abuurasho, guurka oo ay ku waasheen, siyaasada oo ay uga dhaarteen cid aan mabda'ooda heysan.
Al muhiim hada waxey ku jiraan fashilkii ugu xumaa ee soo wajaha waxana ururka ku soo haray tiro yar oo dhinacii la doono Shiikh Shariif uu u jiheeyo maalinkastana fowdo ujoog ah. waxeyna hada Shariifka ku raaceen wadankan ciidamo shisheeye ah ku soo qulqulayaan in hadane la abuuro qilaaf siyaasadeed si xilka looga qado C/wali Gaas.
Waxeyse su,aal ka taagan tahay sida ay kooxdaan ugu guuleysan karaan iney shaqada ka ceyriyaan R/wasaarahii 3aad mudo 2 sano gudahood ah.
La soco wararkena danbe iyo qaska siyaasadeed ee ka curan doona maalmaha soo socda Mogdisho amaba TFGda oo laga yaabo inba xukumada dhan si sahlan u dhacdo oo uu Shariifka si toos ah xilka uga qado R/wasaare C/wali gaas. si kastaba waxaa siyaasadan jahwareerka ku qotonta ee ka taagan Somaliya ka bad badi doona hadba kooxdii u ololeyso sidii wadanka looga saari lahaa xiliga kumeel gaarka inata kale fashil ayey arintooda ku dhamaan doontaa sida Farmaajo ku dhacday amaba hada u fashilmeen arintii Road Map-ka ee la doonayey in tirada xildhibaanada lagu dhimo shirka Garoowena leys kugu tago taasi oo ahda mesha si rasmi ah uga baxday maadam aysan arimah Road Map-ka awalba Soamliweyn u dhameyn oo ay hor boodayeen dhawr qabiil oo Somaliyeed.
· admin on November 05 2011 14:43:54 · 0 Comments · 2294 Reads ·
14,633,899 unique visits